Manhanga Sinamoni Porridge | Bezzia
Nungu sinamoni porridge
Maria vazquez | 11/05/2021 10:00 | Easy mapepa
Uri kutsvaga imwe yemangwanani yevhiki? mabvazuva manhanga sinamoni porridge Iyi imwe nzira yakanaka yekutanga zuva. Porridge ndomumwe wemabiko edu emangwanani uye vakatikunda nekuda kwekunaka uye kubata kunonaka kwemanhanga.
Nhanga ndiyo chete inotapira muporridge iyi, ichiita sarudzo yakanaka kwazvo. Sarudzo ye vegan kana ukashandisa mvura kana chinwiwa chemuriwo kuigadzirira. Tinoda kusanganisa zvese uye tinowanzoenda kune oatmeal kana almond chinwiwa kuti zviite.
Unogona kupedzisa porridge iyi nenzira dzakasiyana. Takazviita nechokoreti nemadate, asi iwe unogona zvakare kuzviita nemichero yakaomeswa senge walnuts kana hazelnuts, izvo zvinowedzera zvinokatyamadza kubata kune iyo yekubheka. Pane zvakawanda zvingasarudzwa kuti upedze iyi porridge, tsvaga chaunofarira! Uye kana iwe uchida porridge, usazeze kuyedza iyo usiku humwe oatmeal uye almond cream kuti takakurudzira masvondo mashoma apfuura.
1 Zvinongedzo zvemunhu mumwe
Zvinongedzo zvemunhu mumwe
90 g. manhanga akachekwa
Almond kana oatmeal chinwiwa kusvikira wavharwa (kana mvura kana mukaka)
1 ounce chokoti yakasviba
Nutsu kana michero isina mvura yekushongedza
Isa muhombodo iyo yakakangwa manhanga puree, maoat akakungurutswa uye 1/2 teaspoon yekinamoni.
Vhara nechinwiwa chemuriwo, mvura kana mukaka, sanganisa uye bika pamusoro pemoto wakadzika kwemaminitsi gumi kana kutozosvikira yave nehunhu hwaunoda. Rangarira kumutsa musanganiswa nguva nenguva kuitira kuti isanamatire uye igozorora.
Kana uchinge wabikwa, simbisa iyo manhanga porridge mundiro uye zadza ne Ounce chokoreti, mamwe mazuva akachekwa uye sinamoni shoma yepasi.
Shumira inopisa uye unakirwe nehupuni.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Recipes » Easy mapepa » Nungu sinamoni porridge
Konmari Method: iyo chaiyo nzira yekuronga yako imba
Zvinoita here kukakavadzana nemumwe wako uye musarwa?